Mareykanka & doorashooyinka xiliga kala guurka Soomaaliya
Updated About:290 days ago 0
Mareykanka wuxuu il gooni ah ku hayaa la dagaalanka argagixisada, taasoo ugu muhiimsan danaha uu mandaqada ka leeyay.
Madaxda Gobolka ,sida Males Zenawi, Ismacil Cumar Geelle iyo Yuweri Musafeni ayaa waxay yihiin kuwo mid kasta xiriir gooni ah la leh Dowladda Mareykanka, dano la xariira la dagaalanka argagixisada oo Al-Shabaab ka mid tahay.
Mareykanka waa maalgeliyaha ugu weyn, Dowladdahaaasina ka kaalmeeya kobaca dhaqaalaha iyo awoodaha difaac, saanad iyo hub ayuu ku taakuleeyaa howlgalaada looga soo horjeedo la dagaalanka argagixisada oo qeyb ka noqotay iskaashiga xariirka caalamiga ah ee dowladdaha.
Mareykanka Madaxdaas kalsooni weyn ayuu ku qabaa, xariir fiicana waa la leeyahay, dhinaca Soomaaliyana waxaa jira Sheekh Shariif inuu xariir dahsoon la leeyahay oo aan weli shaaca laga qaadin, waxayna ku saabsan tahay iskaashi in laga yeesho in Soomaaliya aysan noqon hoy Al-Qaacido ka fal gasho
Al-Shabaab in laga xoreeyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan magaalo madaxda Muqdisho ayaa waxay sii xoojisay Saaxiibnimada shaqsiga ee Mareykanku la leeyahay Sh. Shariif Sh. Axmed taasoo la heer ah xiriirka Mareykanka kala dhaxeeyo Madaxda kale ee Gobolka.
Kulankii magaalada Nairobi todobaadkan ku dhex maray Xoghayaha Arrimaha dibada Mareykanka iyo xubnaha saxiixayaasha ismagacaabay ayaa waxyaabihii kasoo baxay waxaa ka mid ahaa in eedo dhanka maasuq maasuqa ah qaban waayay madaxda Soomaaliyeed ee lagu soo bandhigay guddiga la socodka arrimaha Soomaaliya ee Qaramada Midoobay iyo in Dowladda Mareykanka mar kale ku booriso Hoggaamiyeyaasha Soomaalida inaan la masuq maasuqin kaalmooyinka caalamiga ah iyo habka doorashada.
Waaxaas oo dhan marka loo kuurgalo waxay muujinayaan astaamo ah in Mareykanku la dhacsan yahay hoggaaminta Sheekh Shariif, sida Axmed Karazayga Afghanistan oo asna eedo masuq maasuq qaban waayeen xiligii doorashooyinka wadankiisa ka socdeen iyo Nuuri Al-maalikaga Ciraaq oo isna lagu soo saaray doorasho looga tanaasulay kadib markii ay soo baxday inuusan ku guuleysan doonin.
Musharaxiin uu ka mid yahay Cabdiweli Gaas oo afkiisa laga maqal inuu musharax yahay ayaan loo heyn wax daliil ah inuu xariir dhow la leeyahay wadanka uu jansiyadiisa heysto ee Mareykanka. wuxuu Ra’iisul Wasaarenimada ku yimid awood qeybsiga 4.5 iyo isagoo markii hore ka mid noqday golihii wasiirada Farmaajo.
Cabdiweli ayaa xilkiisa Ra; iisul Wasaarenimada weyn doona is sharaxaadiisa kadib hadii uu guuleysan waayo, waxaana loo maleynayaa inuu dib ugu noqon doono Puffalo isaga iyo marwadiisa oo ololaha u heyso.
Marka la tixgeliyo doorashadii hore ee Sheekh Shariif ku yimid xukunka ayaa waxaa la aaminsan yahay iney ku timid taageerada Mareykanka, si loo kala saaro Wadaadada Minditiinta xagjirka ah iyo kuwa Moderati-ka.
Waxaa hada socda doorashadii looga gudbiyay xiliga kala guurka si loo helo dowlad dastuuri ah mudada afarta sano ee soo socoto.
Yaa hoggaamin doona? dadka arrimaha siyaasadda iyo xaalada Soomaaliya u kuurgala waxay adaroosayaan rajooyinka ay qabi karaan dadka u tartamaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Sheekh Shariif wuxuu safka hore kaga jiraa suuragalnimada dadka guuleysan kara. Hadii shaaca laga qaado xiriir kalsooni ku dhisan inuu la leeyahay Mareykanka weyba iska cadahay inuu mar labaad kusoo noqonaya awoodii dalka Sh. Shariif Sh.Axmed.
Wixii amaan iyo dhaliil ah kusoo dir Muxiyaddiin@hotmail.com